Mila fanampiana ny fizahantany manerantany ary mamaly izany i Saudi Arabia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mila fanampiana ny fizahantany manerantany ary mamaly izany i Saudi Arabia
Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Tourism • Dinika fizahan-tany • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Nihaona tamin'ny minisitry ny Jamaika ny minisitry ny fizahan-tany Saodiana - ary nifalifaly izy ireo.
Miova ny tontolon'ny fizahan-tany manerantany sy ireo mpitarika ao aminy. Ny firenena rehetra dia miady ho an'ny fahavelomany manokana amin'ny fotoanan'ny areti-mandringana, raha ny minisitry ny fizahantany Saodiana Ahmed Al-Khateeb, ary ny minisitry ny Jamaika dia mahita vahaolana manerantany ho lasa hery manerantany ho an'ny indostria.
COVID-19 dia namono ny fizahan-tany amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao nanomboka ny volana martsa 2020. Miantsoantso vola, fanampiana ary fitarihana ny indostria ary IZY Ahmed Al Khateeb Namaly tamin'ny fomba lehibe ny minisitry ny fizahantany any Saudi Arabia.
Fantatra tamin'ny indostrian'ny fizahan-tany ara-pivavahana 12 miliara isan-taona, Arabia Saodita dia namolavola ny Tetikasa Ranomasina Mena ary nandany Dolara amina miliara amin'ny fampandrosoana ny fizahan-tany ao amin'ilay Fanjakana, ary ankehitriny koa ho an'ny fandefasana indray ny fizahantany iraisam-pirenena.
Amin'ny maha olom-baovao mpizahatany any amin'ny tontolo andrefana azy, miaraka amin'ny vola azo ampiasaina, Saudi Arabia Saudi Arabia dia nahavita nifindra avy any amin'ilay zaza vaovao eny an-tsena mankany amin'ny hery lehibe indrindra amin'ny fizahan-tany manerantany talohan'ny nahatsapan'ny olona azy akory. Mandondom-baravarana Saudi Arabia izao tontolo izao, ary ireo vahiny toa izany dia avela hiditra sy horaisina tsara. Ity no fomba arabo.
HE Ahmed Al-Khateeb, minisitry ny fizahantany ho an'ny fanjakan'i Saudi Arabia no nibodo ny toeran'ny filohan'i Saudi Arabia Manampahefana ankapobeny fialamboly teo anelanelan'ny Mey 2016 sy Jona 2018. Talohan'ny naha minisitry ny fahasalamana azy. Niasa tamin'ny naha mpanolotsaina azy tao amin'ny Fitsarana Royal Saudi.
Nanomboka tamin'ny Tetikasa Ranomasina Mena izay noforonina ho fizahan-tany fizahan-tany tsy manam-paharoa sy lafo vidy izay hanaiky ny natiora, ny kolontsaina ary ny fitsangatsanganana, mametraka fenitra vaovao amin'ny fampandrosoana maharitra ary mametraka an'i Saudi Arabia amin'ny sari-tany fizahan-tany manerantany. Arabia Saodita dia mampiasa vola be amin'ny fananganana fotodrafitrasa fizahantany manara-penitra.
Tamin'ny volana septambra 2019 fotsiny dia nanomboka namoaka visa mpizahatany ho an'ny olom-pirenen'ireo firenena tandrefana i Saudi Arabia. Tao anatin'ny 10 andro voalohany, Arabia Saodita dia nanambara fa mpitsidika 24,000 no tonga tany amin'ilay Fanjakana voalohany.
Ity no fotoana voalohany nisehoan'ny fizahan-tany nentim-paharazana ho an'ny firenena izay nakatona tamin'izao tontolo izao, afa-tsy ny fizahan-tany ara-pinoana. Ny vola miditra amin'ny fizahan-tany ara-pinoana amin'ny 2019 dia $ 12 miliara.
Tsy i Arabia Saodita irery no mpilalao fototra ao amin'ilay faritra fa manana anjara toerana lehibe amin'ny fitoniana ny toekarena manerantany. Ny vinan'ny Fanjakana 2030 dia mifamatotra akaiky amin'ny tanjona kendrena G20 momba ny fitoniana ara-toekarena ara-toekarena, fampandrosoana maharitra, fanomezan-danja ny vehivavy, fanatsarana ny kapitalin'olombelona, ​​ary fampitomboana ny varotra sy ny fampiasam-bola. nankatoavin'ny filankevitry ny minisitry ny Arabia Saodita, niara-niasa tamin'ny banky tsy miankina sy fampiasam-bola hanohanana ny fivoaran'ny sehatra tsy miankina ary mandrisika ny fampiasam-bola fanampiny manerana ny indostria
Ny ankamaroan'izao tontolo izao dia sahirana mitazona ny fizahan-tany amin'ny raharaham-barotra, raha Arabia Saodita kosa dia manambola miliara maro hananganana ny Fanjakana ho ivon-toerana manerantany amin'ity sehatra ity. Manakarama vehivavy matanjaka indrindra amin'ny fizahan-tany, ny CEO WTTC Gloria Guevara amin'ny maha mpanolotsaina ny minisitra azy dia mampiseho fa matotra ny firenena, ary mazava ny fikasana.
Jamaica sy ny fanjakan'i Saudi Arabia Nanomboka dinika natao hanamorana ny fiaraha-miasa sy ny fampiasam-bola amin'ny fizahan-tany sy ny sehatra lehibe hafa, taorian'ny fivoriana nifanaovan'ny minisitry ny fizahantany, Hon. Edmund Bartlett.
Miseho izany rehefa miantso an'i Arabia Saodita, ny Fanjakana dia mamaly amin'ny fisakaizana, vola ary marika marika manerantany vonona hanampy na handinika ati-doha.
Saudi Arabia no lasa toko faharoa ao amin'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany, ny fikambanana ao ambadik'izao tontolo izao fananganana.travel fifanakalozan-kevitra.
Ny fizahan-tany sy ny fahafaha-manao dia lehibe any Arabia Saodita sy. Ny mpikambana ao amin'ny Birao WTN Raed Habbis avy amin'ny Baseera Conferences sy Exhibition dia nanolotra tontolon'ny mpitarika fizahantany avo lenta any Arabia Saodita, fa ny tsara indrindra mbola ho avy.
Ny fangatahana fizahan-tany ao amin'ny fanjakana ho an'ny mpizahatany tandrefana dia eo. Vonona ny mpitsidika hijery ny tantaran'ny faritra ary hiaina mivantana ny fitiavana mandray vahiny sy ny kolontsaina manintona an'i Saudi Arabia.
Henoy ny fifanakalozan-kevitra amin'ny Desambra 2029